BoomTown Yapedza Sei Iyo Yayo yeMartech Stack NeKufona kweUngwaru | Martech Zone
Chipiri, Mbudzi 8, 2016 Chipiri, Mbudzi 8, 2016 Nzizi Pearce
Kutaurirana, uye kunyanya kufona, ramba uchive pakati penzira dzinoshanda kwazvo dzekubatana nevanhu nekudzishandura kuva vatengi vakavimbika. Mafoni efoni akavhara musiyano uripakati pekutsvagisa online uye kufona - uye kana zvasvika pakutenga kwakaomarara, kwakakosha, vanhu vanoda kusvika parunhare votaura nemunhu. Nhasi, tekinoroji inowanikwa kuwedzera ruzivo mune aya mafoni, saka vashambadziri vanogona kuita zvakafanana smart, dhizaini inotungamirwa sarudzo nezve mafoni avanogadzira edhijitari chiteshi.
At BoomTown, isu takaisa mari zvakanyanya mu daidza hunyanzvi tekinoroji. Isu tiri yekutengesa uye yekushambadzira software kambani inobatsira real estate makambani kuvhara mamwe madhiri. Tichifunga kuti mhinduro yedu iri pamutengo wemadhigiri mashanu, vatengi vedu havasi kuzotenga - kana kutozvipira kudemo - vasati vasvika parunhare nemutengesi. Nekuda kweizvozvo, mafoni edu ari kurira nguva dzese.
Pamwe, ndiwo mamiriro ebhizinesi redu. Real Estate vanhu vanofarira kutaura - vane hunyanzvi hwekukurukura, uye vanofarira kuita bhizinesi parunhare. Asi zvakare hunhu hwebhizinesi nhasi: vanhu vari kutsvaga, kubhurawuza nekudana kubva kumafoni avo sezvavanofamba munzira yekutenga. Zvakakosha kuti timu yedu yekushambadzira ine ruzivo rwekutevera, kuongorora uye kugadzirisa aya mafoni ari mukati, uye kuti timu yedu yekutengesa yakagadzirirwa kupindura mafoni angangoshanduka.
Isu takaisa mari mukati Inzira yeInvoca Yekushambadzira Cloud kuwedzera dura rekunzwisisa kutenderedza chiteshi timu yedu yekutengesa inoshandisa zvakanyanya. Iyi yekuwedzera data inobvumidza edu ekushambadzira uye ekutengesa zvikwata kuti zvishande zvinobudirira pamwe chete - vedu reps vanogona kutora mafoni akawanda uye kuwana kukosha kwakanyanya kubva kune yega yega, uye timu yedu yekushambadzira inogona kupa yedu mishandirapamwe yekutungamira iyo inoshandura parunhare.
Kungotenderedza Invoca, isu takabva tatema mutengo wedu mutobvu (CPL) muhafu. Izvi zvinodaro nekuti isu takakwanisa kutaura kuti edu ese mafoni anotungamira kumakambani akasiyana edhijitari tarisiro kana mutengi akabatana navo vasati vatisheedza. Isu takadzidza kuti hapana munhu anofona uye anotsanangura ruzivo rwekuti vakanzwa sei nezvedu - tinogona kuona kuti vakatsvaga temu, ndokubaya pane chinongedzo, vakaita ongororo, vakataura neshamwari shoma nezvesarudzo, uye vakafona . Kune iyi nzira yakaoma kunzwisisa yekutenga, vanogona kutaurira vatengesi vedu ivo vakanzwa nezvedu kuburikidza "neshoko-remuromo."
Ini ndinotenda kudaidzira huchenjeri kunofanirwa kune bhizinesi nhasi, uye pane zvimwe zvinhu zvandakadzidza izvo zvinogona kubatsira vamwe vatengesi kuti vatange neiyi nyowani nyowani yekushambadzira tekinoroji.
Kutanga nehungwaru hwekufona
Pane zvinhu zvishoma zvekutarisa kana uchiongorora vanofona vehungwaru. Yekutanga isimba rekuisa kuiswa. Kuiswa kwenhamba kwesimba kunokutendera kuti utsive iyo static kambani nhamba yefoni pane yekushambadzira efaiti - peji rinomhara, eBook kana peji yemitengo yewebhusaiti, semuenzaniso - nenhamba yakasarudzika inosunga kumashure kunobva kufona yega yega. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kuona yakaumbirwa dhata senge iro kiyi yekufona yaakatsvaga, kushambadza kwavadzvanya pairi, uye mapeji ewebhusaiti yako yavakabhurawuza vasati vatora foni.
Uchishandisa Invoca, mutengesi anotengesa anogona kuona ruzivo rwese urwu nguva iyo foni painorira. Ivo zvakare vane zvimwe zvakakosha data mapoinzi, senge mari yemunhu anenge afona, nhoroondo yekutenga uye huwandu hwevanhu, izvo zvinovapa mufananidzo wemunhu kune rumwe rutivi rwetambo. Ini ndinokurudzira kushandisa iyi ruzivo kuendesa iye anodana kune akakodzera mumiriri mune chaiyo-nguva - vatengi varipo kana VIP tarisiro kune yako akanakisa ekutengesa rep, semuenzaniso.
Izvo zvakakosha kushandisa chikuva icho chinobatana mushe neako aripo ekushambadzira uye ekutengesa tekinoroji stack. Isu tinoshandisa Invoca's Facebook integration yekunzwisisa kushanda kwemakambani edu enharaunda kushambadzira; izvi zvinoita kuti tizive kuti ndeupi wevachafonera akafurirwa nezviziviso paFacebook parwendo rwavo. Izvi zvinonyanya kubatsira izvozvi nekuti isu tinobaya-kusheedzera kushambadzira chaimo muFacebook Brand Peji uye mune edu Facebook kushambadza.
Iko kusanganisa kweSalesforce kunotibvumidza kuti tinyore mune yedu data yevatengi uye nekuvaka iyo inotungamira mbiri kune yega nhare. Vamiriri vedu vanogona kuona kwakabva iko kufona, ndiani ari pamutsetse uye chero kudyidzana kwekare kwavakave nekambani yedu. Izvi zvinobvisa yakawanda ye mira utange chimiro chekufona kwekutanga; vatengesi vekutengesa vanogona kungosimbisa iwo madhiri avanotova nawo.
Pfupi kufona chengetedza tarisiro inofara uye kuratidza kuti tinokoshesa nguva yavo. Izvi zvasunungurawo nguva yevanodzoka kwedu - timu yedu yekutengesa inotora dzinosvika chiuru nemazana mashanu emafoni pamwedzi, uye tekinoroji iyi yakacheka nguva yeaya mafoni kusvika pamaminitsi 1,500 kusvika ku1.5 imwe neimwe. Izvi zvakasununguka maawa mwedzi wega wega reps inogona kushandisa kugadzira bhizinesi rakawanda.
Iwe zvakare unoda chikuva chinokutendera iwe kuti uongorore zvirimo zvehurukuro izvo zvinoitika parunhare kukurudzira ramangwana rekurera macampaign - kana mune zvimwe zviitiko, shandisa izvo zvemukati kuti iwe regai chengeta vatengi vakatotenga parunhare. Izvi zvinogona kunzwa matauriro matsi kune vatengi vanowedzera kutarisira makambani kuti ape basa rakasarudzika munzira dzese.
Kuzvigadzirira Kuti Ubudirire
Isu tava kukwanisa kuona kuti mafoni edu ari kubva kupi, ndiani ari pamutsetse uye mamiriro ekufona. Kugadzira sisitimu yakaita seiri basa, ndinokurudzira kutora mamwe matanho ekutanga kuti uwane nzwisiso mumafoni ari mukati:
Kwidziridza manhamba efoni kuburikidza neako epamba peji, peji peji uye yega yekutengesa chiteshi chauinacho - zvemagariro, tsvaga, machena mapepa, webinars, zviitiko zvekambani, kunyangwe podcast. Ita kuti zvive nyore kuti vanhu vakufonere.
Chengetedza mari-yeku-kufona kushambadzira pane ako ehukama uye ekutsvaga kushambadzira, kuti vanhu vanotsvaga kana kubhurawuza parunhare vanogona kubaya bhatani uye kukufonera iwe zvakananga.
Shandisa zvinesimba manhamba efoni kune yega yega nhumbi, nenzira iyo iwe unogona kugara uchiona uko mafoni ari kubva. Izvo zvakakosha mukuvandudza kushambadzira ROI.
Kutanga kufunga nezvedanho sezvaungaita ako edijimari midziyo - uye udanidzi iwo iwo iwo mwero wekuonekwa mune zviri kushanda uye izvo zvisiri.
Takadzidza zvakawanda munzira uye takawana zvimwe zvekufungidzira zvisiri izvo. Pakutanga, isu taitarisira kudaidzira huchenjeri kuti tiwedzere huwandu hwenhamba dzevatungamiriri. Iyi yakanga isiri iyo nyaya - asi kuve nekuziva kwakanyanya kune vatinosheedzera uye nemishandirapamwe yakakonzera maitiro avo yakazove yakakosha zvakanyanya. Takazadza mukaha wakakosha mukutengesa kwedu tekinoroji, yakagadziridzwa kune yakakwira-kukosha mafoni anotungamira kune dzimwe shanduko, uye takagadzira chakanakisa chiitiko kune vanhu vanosarudza kutidaidza.
Tags: daidza ungwarukufona kwekuteverakufona tekinoroji tekinorojimutengo pamutungamirifacebook kufona yekuteverafacebook inodaidzainvoca
Rwizi ndiye Director weKushambadzira we BoomTown, iri online real estate chikuva yakavakirwa muCharleston, SC. Nzizi dzave nemakore anopfuura mapfumbamwe ruzivo mukushambadzira kwepamhepo uye nzvimbo yekushambadzira, ichishanda nemakambani mazhinji eFortune mazana mashanu pae-commerce, mafambiro uye zvivakwa zvedzimba.
TubeMogul: Dhijitari Vhidhiyo Ad Kuronga uye Kutenga Pakati PeMikana